Mazano Akanaka Ekufambisa Paunenge Uine Pamuviri | Save A Train
musha > Travel Europe > Mazano Akanaka Ekufambisa Paunenge Uine Pamuviri
Kuva nepamuviri ndeimwe yenguva dzakanaka kwazvo dzehupenyu hwako. Zvinoita, zvisinei, huya nezvimwe zvinotadzisa. Kunyanya kana iwe ukaronga nezvekufamba uchine nhumbu. Kutakura nekuvaka mucheche kunogumira iyo mhando yekufambisa iwe yaunogona kushandisa kusvika padhuze, kunyanya kana uchifamba uchine nhumbu nyika dzese. Imwe haigone kubhururuka uye dzimwe dzakawanda nzira dzekufamba uchinge uine pamuviri kana kupfuura yakati wandei mwedzi, kana kana uri kusangana nematambudziko. Ive neshuwa yekubatanidza zvese izvi pakuronga kwako kwekufamba kwepamuviri. Nzira iri nyore kwazvo yekusvika kwauri kuenda kana uchifamba uine nhumbu Via chitima. Makambani ekurovedza anowanzo chengeta vakadzi vane nhumbu, Kuigadzira imwe yedzimwe nzira dzinozivikanwa dzekufambisa kana uchifamba uchinge uine pamuviri.
Train Transport Ko The Eco-Friendly Way To Travel, Kunyanya Kana Tkusimuka Paunenge uine Pamuviri. Nyaya iyi yakanyorwa kudzidzisa pamusoro Train Travel neSave A Train, Iwo Akachipa Kwazvo Chitiketi Matikiti Webhusaiti Munyika.
Usati watombotanga rwendo rwako newako mudiki, tora nguva yekugadzirira muviri wako kufamba kana uine nhumbu. Edza kuita zvakanyanya kurovedza muviri nepaunogona, izvi zvichaita ona kuti muviri wako uri pachimiro chakanakisa kudzika jecha kumawindo ekufamba. Kufamba uchiri nepamuviri kunogona kutora zvakawanda kubva mauri. Dzidzira kutambanudza, nekusimbisa musimboti wako nemakumbo. Kurara mumacomputer ekufambisa inowanzo dzvinyirirwa kupfuura yawajaira, uye iwe ungangoda kushandurwa kwakawedzerwa kuti ugadzikane paunenge uchifamba uine pamuviri.
Amsterdam kuenda kuLondon
Paris kuenda kuLondon
Berlin kuenda kuLondon
Kufamba Uchiri Pamuviri Zano 1: Tarisa Uchiremba Wako
Usati watanga kufamba uchine nhumbu, tarisa pamwe neod yako kuti iwe uri chokwadi yakajekeserwa iyo. Ive neshuwa kutsanangura kuti uri kufamba uchine nhumbu nechitima uye kwete nemhepo, sezvo izvo zvichinyanya kuve nemusiyano mukuru mumhedzisiro. Vakanyanya kurwara nepamuviri uye avo vakanonoka mune yavo yechitatu nguva yekuzvitakura vanogona kunyimwa mukana wekufamba kana uine pamuviri, saka zvinogara zvakanaka kucheneswa zvisati zvaitika kuti udzivise kuora mwoyo. Paunenge iwe uine zvese-zvakajeka, book rako chitima tikiti paIndaneti.
London kuti Paris
Rotterdam kuenda kuParis
KweBrussels kuna Paris
Tkusimuka Paunenge uine Pamuviri muromo 2: Ronga Nehanya
Isu tese tinoziva kuti zviitiko zvakadai semichato nemapato hazvigone kuwira mune yako nguva yakakwana, kunyanya kana iwe uri kuronga nezvekufamba uchine nhumbu. Pazvinogoneka, zvisinei, edza kuve nechokwadi chekuti kufamba kwako kunofambidzana nechikamu chakanyanya kunaka cheyako nhumbu. Iyo yekutanga trimester inowanzo achitambudzwa nenzeya, kushaiwa kwekuda kudya uye kazhinji unonzwa kutya, idzo dzakaipa nhau dzekufamba uchine nhumbu. Yechitatu trimester ndipo paunotanga kunzwa zvishoma kunge whale, uye kumira kwenguva ipi neipi yenguva kunoita kuti tsoka dzako dzipunzike. Wedzera yakazvimba makumbo, kushaya hope, uye kutenderera kwemucheche kuri kuramba uchifambira kupinda mune izvo uye unogona kunge uine rwendo husina mutsindo kana uchifamba uchine nhumbu. Iyo yechipiri trimester kazhinji ndiyo nguva yakanakisa yekufamba kwako. Iwe hausati wakakura zvakanyanya zvakadaro, uye kazhinji, kusvotwa kwanyura. Kufamba uchiri nepamuviri kunowanzoitwa zvakanaka kana ukasapedza nguva yese uchida kukanda mapfumo pasi, kana kurara pasi!
Milan kuenda kuRoma
Pisa kuenda kuRoma
Naples kuenda kuRoma
Kufamba Uchiri Pamuviri Zano 3: Huya neNyu Homwe Mapiro
Kugadzikana paunenge uchifamba uchiri nepamuviri hazvisi nyore. Izvi zvinonyanya kuitika kana zvichinge zvakati gare gare mumimba. Ive neshuwa kurongedza yako yaunofarira mapiro erwendo. Kuve neyako mbiru hazvizovimbisa chete nyaradzo kana uchifamba uine pamuviri, asi zvakare zvichakupa iwe pfungwa yekuziva kuti ikubatsire iwe kunzwa kushoma kunetseka. Kufamba uchiri nepamuviri kunogona kugadzira musana wako, mutsipa, uye zvakaringana chikamu chimwe nechimwe chinorwadza. Ngatizvitarisei, zvakanaka chaizvo chero chinhu chinogona kusagadzikana panguva ine nhumbu, saka gara uchiedza kuti ita kuti zvinhu zvive nyore sezvazvinogona paunenge uchifamba uchine nhumbu.
Milan kuenda kuVenice
Padua kuenda kuVenice
Bologna kuenda kuVenice
Roma kuenda kuVenice
Tkusimuka Paunenge uine Pamuviri muromo 4: Chengetedza Kune Yako Nguva Tafura
Kufamba uchiri nepamuviri kazhinji kunouya nekunonoka kusati kwaitika. Iwe haumboziva kuti uchanzwa sei pamangwanani erwendo rwako, kana kana muviri wako uchizoda imwe nguva kunze uchifamba kana uine nhumbu. Zvese zvinonyanya kunetsa, uye munhu anogona kazhinji anonoka kunonoka. Dhirowa tafura yenguva pamberi porwendo rwako rwechitima, uye uve nechokwadi chekuwedzera yakawandisa nguva mairi sezvinobvira. Chinangwa chekutanga mangwanani kunonoka kwakadai sepamigwagwa kana chero chimwe chinhu hachingakonzere kuti utize kana uchifamba nepamuviri. chokwadi, kugara uchitenderedza uchimirira chitima chako kungave kuri kurwadziwa, asi zviri nani pane kumhanyisa, ndichiri nepamuviri, kuibata.
Salzburg kuenda kuVienna
Graz kuenda kuVienna
Prague kuenda kuVienna
Kufamba Uchiri Pamuviri Zano 5: Usavimba Nezvekutenga Chikafu
Zvese zvinhu zvinogona kubvisa padumbu rako kana iwe uine nhumbu. Pasina kutaura kuti pane chinyorwa chero ruoko rwako rwezvinhu zvausingafanirwe kudya. Kuunza chikafu chako pachako sechikamu chechirongwa chako chekufamba kuchashayisa hanya nyaya zhinji kana uchifamba uchinge uine pamuviri. Paunorongedza zvako zvekudya, iwe unoziva chaizvo izvo zvirimo, uye chaizvo zvekutarisira. Ive neshuwa yekuzvitakura mubhokisi rinotonhorera kana rimwe rakasungirirwa pakunyudza kuti riitonhore kana kudziyirwa kana uchifamba uchinge uine pamuviri.
Tkusimuka Paunenge uine Pamuviri muromo 6: Katatu Tarisa Mishonga yako
Iko kunyura kwekunzwa kana iwe uchinge uchinge waona kuti wakasiya mushonga wakakosha kumashure ndechimwe chinhu chatisina kuda kusangana nacho, kunyanya kana uchifamba uine nhumbu. Paunenge uchitarisira, iwe unogona kunge uri pamishonga dzakasiyana kune yehupenyu hwezuva nezuva. Izvi hazvigone pakarepo kuenda kumberi kwepfungwa dzako paunenge uchirongedza zvekufamba uchiri nepamuviri. Ive neshuwa kuti usangotarisa katatu chete kuti une mishonga yakaringana yekufamba uchinge uine nhumbu asi uwane mumwe munhu kuti akuongorore iwewo.
Frankfurt kuenda Berlin
Leipzig kuenda Berlin
Kufamba Uchiri Pamuviri muromo 7: Usasimudze Mari Yako!
Izvi zvinowanzofuratirwa kana uchifunga zvekufamba uchine nhumbu. Saka kazhinji isu tinongotakura sutukesi kana bhegi kuti tingozviita uye kunze kwenzira. Zvikwereti zvinorema, saka kuisimudza uchine nhumbu is a-a! Tora mumwe munhu kuti akupe ruoko kana uchigona, zvikasadaro rira pasi pasi murindi kuti akubatsire paunenge uchifamba uine pamuviri.
Tkusimuka Paunenge uine Pamuviri muromo 8: Usafambe wega
Kunyangwe kana iwe ukaronga nezvekutora rwendo uri wega, edza kuzvisunga mukati pamwe chete nemushandi- kana shamwari inoda kuenda kunzvimbo imwecheteyo. Kufamba uchine nhumbu oga zvinokuisa panjodzi dzakakura. Iwe haamboziva kana chimwe chinhu chingangokanganisa, saka unoda chiso chine hushamwari ipapo newe kuti akubatsire kunze. Paunofunga nezve zvirongwa zvako zvekufamba, edza kusanganisira mumwe munhu mumwe waunovimba naye kuti afambe newe.
Kufamba Uchiri Pamuviri muromo 9: Uya Nemamwe Mimhanzi
Iyo poindi yakazara kumashure kwekugadzirira kana iwe uchifamba iwe uchine pamuviri ndeyekuderedza kushushikana. Kushushikana kunogona kukonzera marudzi ese ekusafarirwa uye asina hutano mhedzisiro mumuviri wako. Ive neshuwa kuunza mimhanzi pamwe newe muchitima chako. Pira mumusoro mako, uye ingogara kumashure wozorora paunenge uchisvika kwauri kuenda. Rangarira kufema.
muromo 10: Bhuka Matikiti Ako Mukufambira mberi
Ita shuwa kuti kwete chete unongobata matikiti ako online pamhepo yekufamba uchinge uine pamuviri, asi iwe zvakare unowana matikiti anodhura echitima neSave A Chitima. Kuve nechokwadi chekuti iwe une rugare rwepfungwa nezvekuwana matikiti akanakisa, zviite pachine nguva mberi sezvingabvira, wana matikiti echitima akakodzera zvakakosha kuti uve neruzivo rwakanaka paunenge uchifamba uchinge uine pamuviri.
Kuva nepamuviri chiitiko chinoshamisa uye dzimwe nguva chinotyisa. pa Save A Train tinoda kukubatsira kuti unakirwe nerwendo rwako, ronga mberi, uye dzivisa chero njodzi dzinogona kuitika. Tkutyisa ndichiri nepamuviri nechitima chiitiko chakanakisa zvakadaro, uye izvo hazvifanirwe kuchinja nekuti uri kutarisira mwana!
Unoda embed yedu Blog romukova “10 Mazano Ekufambisa Uchiri Pamuviri” pana yako nzvimbo? kana Unogona kutora mapikicha edu uye rugwaro uye kutipa chikwereti ane kubatana uku Blog romukova. Kana tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-traveling-pregnant%2F%3Flang%3Dsn ‎- (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
europetravel nepamuviri Train Travel achifamba panguva yemimba TravelPregnant traveltips